Lacagta caddaanka ahi kama dhex mari doonto Tagayaasha Ganacsi! Taksi lama qaadi karo maaskaro la'aan! | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraLacagta caddaanka ahi kama dhex mari doonto Tagayaasha Ganacsi! Taksi lama qaadi karo maaskaro la'aan!
09 / 05 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, DAQIIQADII MINUTE, TURKEY
Lacagta cashuurta tagaasida ahi ma gudbi doonaan la'aantiis
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa u dirtay wareegto taxaddar nadaafadeed oo taksiile ah oo leh 81. Marka loo eego wareegga, tagaasida ayaa la baabiin doonaa toddobaad kasta, macaamiisha ma awoodi doonaan inay helaan taksi la'aan maaskaro. Wadayaasha tagaasida ganacsiga waxay u dhaqmi doonaan si waafaqsan xeerarka nadaafadda shaqsiyeed. In kabadan 3 macmiil isla waqtigaas lama aqbali doono.
Wareegtada uu soo diray Wasiirka Arimaha Gudaha Sületman Soylu oo leh 81 dowladood ayaa lagu yiri: “Waa muhiim in la raaco fogaanta bulshada iyo qawaaniinta nadaafadda shaqsiyeed si loo maareeyo halista cudurka coronavirus (Covid-19) ee saameeya adduunka oo dhan. Gobolkeenna wuxuu ku qaadaa talaabooyin fara badan hey'adaheeda si looga hortago faafidda faafitaanka cudurkaan lagana hor istaago muwaadiniinteenna inay qatar geliyaan noloshooda, wuxuuna go’aamiyaa qawaaniinta lagu raaco macnaha guud oo lala wadaago muwaadiniintayada.
Qaab-dhismeedka dhexdiisa gudaheeda, tillaabooyinka lagu qaadayo gaadiidka dadweynaha ayaa la go'aamiyay waxaana loo diraa Goleyaasha Degmooyinka. Inta lagu gudajiro howlaha tagaasida ganacsiga, ayaa waxaa soo ifbaxaya khataraha qaarkood marka loo eego masaafada bulshada iyo talaabooyinka nadaafadda shaqsiyadeed dartiis sababta oo ah qulqulka aagga baabuurta dhexdeeda iyo adeegsiga aagaggan dadbadan maalintii.
Si loo ciribtiro khatarahaas, tillaabooyinka soosocda waa in lagu qaadaa geedi socodka masiibada ka dib qiimeyn lagu sameeyay wasaaradaha ay khusayso.
1- Gawaarida loo istcimaalo tagsi ganacsi iyo tagaasida ganacsiga waa la nadiifin doonaa / jeermi doonaa waqtiyo joogto ah, ugu yaraan usbuucii hal mar. Dukumiinti ay soo saartay hay'adda idman, hay'adda ama qolalka fuliya ku-takhalusid gaadhiga si loo soo bandhigo markii loo baahdo oo muujinaya taarikhda gaadhiga jeermis-jabay lagu hayn doonaa gaariga.
2- Wadayaasha tagaasida ganacsiga waxay ku dhaqmi doonaan si waafaqsan qawaaniinta nadaafadda shaqsiyeed waxayna runtii isticmaali doonaan maaskaro gudaha gaariga.
3- Tagaasida ganacsiga, agab / shey ama waxyaabaha ku jira ama 80 darajo oo cologne ah ayaa laga heli karaa isticmaalka macaamiil kasta oo gaari saaran maalinti, darawallada tagaasida ganacsigana waxay usheegi doonaan macmiilka inay / ay isticmaali karaan daawada jeermiga ama koloorta isla marka ay taksi galaan.
4- In ka badan sedex macmiil lama aqbali doono tagaasida ganacsiga isku mar.
5- Macaamiisha ma awoodi doonaan inay qaataan Taksiyada ganacsiga ee maaskaro.
6- Adeeg kasta oo macmiil ah ka dib, waxaa la siin doonaa si loo tirtiro / u baabi'iyo meelaha ay macaamiishoodu jir ahaan ula xiriiri karaan (gacanta albaabka, badhanka furitaanka, kuraasta iwm) aagga / joogsiga iyadoo la raacayo qawaaniinta taraafikada iyo hawo hawo lagu xiro.
7- Macluumaadka iyo tilmaamaha lagama maarmaanka ah waxaa sameyn doona qolal xirfadlayaal ah iyo hawl wadeyaal si kiiska taksiga loogu bixiyo hababka lacag bixinta ee aan lala xiriirin ee aan u baahnayn xiriir jirka ah (kaarka amaahda, codsiyada mobilada, iwm.).
Waaxyada fulinta sharciga, maamulada maxalliga ah, qolalka xirfadleyda ah iyo qeybaha la xiriira / mas'uuliyiinta hay'adda iyo mas'uuliyiinta lagama maarmaanka u ah inay go'aannada lagama maarmaanka ah ka gaaraan Guddoomiyeyaasha Gobollada / Degmooyinka degmada ee la xiriira tallaabooyinka kor ku xusan isla markiiba, si looga hortago wixii dhibaatooyin ah ee dhaqan ahaan u dhaca iyo sababa dhibaateyn, isuduwidda iyo kormeerka wax ku oolka ah ee ay wadaan ciidamada taraafikada;
Nidaamka Cusub ee UKO Taageeridda Wax soosaarka Qoyska ee Canshuurta Sareysiga Ganacsiga
Haddii aan Iskuulka Cardimku haysan karin masaafada ugu dheer, ma awoodi doontid inaad hesho IZBAN!
Haddii aadan rabin inaad tagto Izmit
Tareenku kuma socon doono Akhisar
Ogeysiinta Iibsiga: Saxeexida iyo tamarta aan ganacsiga aheyn ee udhaxeysa Pamukova iyo Eskişehir ve
IZBAN ayaa raacay rakaabkii diyaaradda
T-Talef waxay soo gashay Bilecik
Baadhitaan adag oo Gawaarida Adeegga iyo Taksiyada ee Balikesir
Rakibaadda Horusocodka Kaashka ah iyo Xawaaladda Xisaabinta
Lammaanaha waayeelka ah ayaa u duulaya tareenka baabuurta ganacsiga | Konya (Sawir Sawir)
Shirkadda tamarta ee tamarta ganacsiga ee loogu talagalay dadka u shaqeeya signalada signalada ee u dhexeeya Köseköy iyo Karagözler